मानवताको अंश नभएको मानव | चितवन पोष्ट दैनिक
मानवताको अंश नभएको मानव
२०७० माघ १५, बुधबार ०४:२० गते
-दुर्गा रेग्मी ज्ञवाली
कार्यालयमा समाचार तयार पार्ने क्रममा अनलाइनहरु हेर्दै जा“दा बीबीसी हिन्दी अनलाइनको एउटा समाचारले मेरो ध्यान केन्द्रित ग¥यो । त्यो समाचार पढेर सक्न नपाउ“दै मेरो त एकछिन होस नै उडेजस्तो भयो । यति निर्दयी पनि हुन सक्छ र मान्छे ? भन्ने प्रश्न मेरो मनमा बारम्बार आइरह्यो ।
समाचार थियो, भारतको पश्चिम बंगालको एक गाउ“मा गैरआदिवासी केटास“ग प्रेम गरेबापत पञ्चायतले तोकेको २५ हजार रूपैयाँ तिर्न नसक्दा सामूहिक करणीको सजाय पाएकी एक किशोरीको । २० वर्षीया ती किशोरीलाई तोकेको जरिवाना तिर्न परिवारले नसक्ने बताएपछि पञ्चायतले सामूहिक करणीको सजाय सुनाएपछि १२ जनाले सामूहिक करणी गरेका थिए । ती किशोरी अहिले गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा उपचाररत रहेकी छिन् भने सामूहिक करणीको आदेश दिने पञ्च र करणीमा संलग्न १२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यसअघि गत वर्ष पनि भारतको दिल्लीमा सामूहिक करणीपछि एक किशोरीको मृत्यु भएपछि सरकारले महिला हिंसाको कानुनमा नै परिवर्तन गरेको थियो ।
अफ्रिकाको एक समुदायमा पुरूषहरुको कामुक नजरबाट बच्नका लागि त्यहा“का महिलाहरुले बालिकाहरु किशोरी भएपछि स्तनमा तातो ढुंगाले डाम्ने गरेको दर्दनाक घटना थाहा पाउँदा मलाई नारी हुनुको पीडाले असह्य रुपमा चिमोट्यो । भारत, पाकिस्तानलगायतका देशहरुमा महिलामाथि तेजाब फ्याँक्ने, नेपालमै पनि बोक्सीको आरोपमा यातना दिनेलगायतका घटनाहरु दैनिक हुने गरेका छन् । यी र यस्ता घटना त एक–दुई उदाहरण मात्र हुन् । नेपाललगायत विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा महिलामाथि अनेक प्रकारका शारीरिक र मानसिक हिंसा हुने गरेका छन् ।
पृथ्वीमा रहेका सजीव प्राणीहरुमध्ये सबैभन्दा विवेकशील प्राणी मानिने मानिसले पशुले समेत गर्न नसक्ने त्रासपूर्ण, दर्दनाक र हिंस्रक काम गर्न पछि पर्दैन, त्यो पनि मुख्य गरी महिलाहरुमाथि । केही पुरूषहरुले महिलाको सम्मान गर्ने गरे पनि ९९ प्रतिशत पुरूषहरुले महिलालाई मानवको नाताले नै पनि हेर्न सक्दैनन् । अझ कति त यस्ता पुरूषहरु छन् कि महिलालाई असह्य पीडा दिनमा सन्तुष्ट हुन्छन् उनीहरु । मानव भनेर आफूलाई विवेकशील मान्ने मान्छेले मानवलाई नै यस्तो पीडा कसरी दिन सक्छ ? यस्तो पीडा दिने समयमा उसमा मानवताको एक अंश पनि जीवित रहेको हुँदैन र ? यस्ता मानवलाई कसरी मानव भन्ने, जसमा मानवताको एक अंश पनि रहेको महसुससम्म पनि गर्न सकिँदैन । पुरूषलाई महिलाले जति सम्मान गर्छन्, त्यसको १ प्रतिशतमात्र पनि पुरूषले महिलालाई हेर्ने नजरमा मात्रै सकारात्मक परिवर्तन गरे पनि महिलाहरुमाथि हुने गरेका यस्ता दर्दनाक घटना हुने थिएनन् ।
जीवनसंगिनी बनेर हरेक दुःखसुखमा साथ दिने, आमा बनेर माया दिने, दिदीबहिनी बनेर सम्मान दिने महिलालाई पुरूषले नाताको मर्यादा त राख्न जानेन–जानेन, कम्तीमा पनि मानवको रुपमा मात्र हेर्न पनि नसक्ने कति संकुचित मानसिकता लिएर समाजमा टाउको उठाएर हिँडेको छ ! महिलाले उसको चाहनाअनुसार नै सध“ै चल्दै जाने हो भने कहिल्यै पनि महिलामाथिको यो अत्याचार अन्त्य हुँदैन । अब त, हरेक महिलाले आफ्नो स्वअस्तित्वको बोध गरी आफ्नो जीवन, समाजलाई नकारात्मक असर नपार्ने गरी आफ्नो इच्छाअनुसार जिउने परिपाटी निर्माण गर्नुपर्छ । पुरूषको इच्छाअनुसार नभई आफ्नो क्षमताअनुसार हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकेमात्र महिलाप्रति पुरूषले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसका लागि हरेक महिलाले आजैदेखि आ–आफ्नो ठाउ“बाट कदम चाल्नु जरूरी छ ।